UKAILYN LOWRY KUNYE NABANYE ABANTU BASECELEBS ABAMKELE IINTSANA NGO-2020 - IINDABA
UKailyn Lowry kunye nabanye abantu baseCelebs abamkele iintsana ngo-2020
Ixesha elilandelayo! Utata osaziwayo kunye nomama abavela UCameron Diaz ukuya UJohn David Duggar ifumene amalungu amnandi osapho ngo-2020.
Umdlali weqonga kunye UBenji Madden babelane ngolwazi lwabo lomntwana kwi-Instagram ngoJanuwari, bebhala ngokudibeneyo kwi-Instagram: Unyaka omtsha ovuyayo ovela eMaddens! Siyavuya kakhulu, sisikelelekile kwaye sinombulelo ukuqala kweli shumi leminyaka lilandelayo ngokuqinisekisa ukuqala kwentombi yethu, uRaddix Madden. Uzibambe ngokupheleleyo iintliziyo zethu kwaye ulifezile ikhaya lethu. Ngelixa sonwabile kakhulu ukuba sabelane ngolu lwazi, sisongeza ngokwenyani siziva ngathi sinamandla okugcina ubumfihlo babantwana bethu. Ke asiyikuthumela iifoto okanye sabelane ngazo naziphi na iinkcukacha, ngaphandle kwenyani yokuba uyathandeka ukuba mhle !! Abanye banokuthi i-RAD. Ukusuka kwikhaya lethu kubo bonke, sithumela uthando lwethu kunye nezona mfuno zikhulu zoNyaka oMtsha oNwabileyo kunye noNyaka oMtsha oNwabileyo.
Unikezo olucetyiswayo Ngeveki ngokupheleleyo ngexesha lokuba esi sibini sihambe ngendlela eninzi phambili yokufika komfazi womntwana wabo. UCameron ujongeka ngathi lo mntwana ngummangaliso ngokwenene, umntu ongaphakathi wabelana naye. Abakwazi nje ukuqaphela ukuba ummangaliso wabo omncinci ngowokugqibela apha. Bachithe iminyaka emi-5 yokugqibela benethemba loku, kwaye yagqitha konke abakulindeleyo.
Ngokumalunga neDuggar, i Ukubala kuqhubeke Inkwenkwezi yamkele umntwana wakhe wokuqala, uGrace Annette, kunye neqabane lakhe, UAbbie Duggar (née Burnett) kwiveki elandelayo ngoJanuwari 7. Ubomi bethu buhlengahlengiswe ngonaphakade ngokufika komfazi wethu ongumntwana, iinkwenkwezi ziyacetyiswa Nathi ngokupheleleyo. Usisipho esihle esivela kuThixo. Sisikelelekile kakhulu ukuba iNkosi simnikile. Kuyi-surreal nangona kunjalo ukwazi ukuba eneneni singutata nomama nangona kunjalo luhambo olutsha olonwabisayo esonwabileyo ukujongana ngokudibeneyo.
I-caresha brownlee inexabiso elifanelekileyo
U-Annette wafika enobunzima bee-7 kilos kunye nee-ounces ezi-2, ubungakanani be-20.75 intshi ubude.
Qhubeka uskrolela ukubona iinkwenkwezi ezongezelelweyo 'iintsana, ukusuka Ngorhatya ’S UJackson Rathbone kunye neqabane lakhe, USheila Rathbone , ukuya Namhlanje ’S UDylan Dreyer nomyeni wakhe, UBrian Fichera .
Chae soo bin ukukhanya kwenyanga okutsalwe ngamafu
uphume nini ulwesihlanu olandelayo
Ubomi beemovie zekrisimesi 2021
Wayephi umntu obaleka inqwelo moya
U-christina el moussa umsesane wokuzibandakanya kwi-tarek
ukuphakama kokumkani kong